POLAND WAXAY SOO CELISAY FAYRASKA ASF - MAQAALLO
Poland waxay ku dhufatay fayruska doofaarka ee Afrika
Sida laga soo xigtay wasiirka beeraha ee Poland, waddankiisa ayaa fayruska hargabka doofaarka Afrika waxaa loo qaaday si buuxda loo xakameeyo.
Jan Krzysztof Ardanovsky, oo ah madaxa arrimaha beeraha ee Poland, ayaa ku nuuxnuuxsaday in tan iyo 19-kii Sebtembar, oo ka mid ah doofaarka, ma jirin wax cudurro ah oo laga helay fayrasta Polishka. Si kastaba ha ahaatee, koofiyadaha gudaha ma aysan fiicnayn - oo ka mid ah 276 qof oo cudurka qaba ayaa la ogaaday, oo isla markiiba ka dib markii la ogaaday infekshanka loo diray karantiilka iyo sii deyn dheeraad ah.
"Maanta, dalalkaas oo ay ku dhufteen xummadda doofaarka ee Afrika ayaa la diiwaan-galiyay, shaqooyinka ka hortagga ayaa horeyba loo dhammaystiray, dhulalka ayaa la nadiifiyay. Xayawaanku waxay degeen barnad, waxsoosaarkuna wuxuu bilaabmayaa hurin. shahaadooyinka iyo shahaadooyinka "- ayuu yiri Ardanovsky. Sida laga soo xigtay isaga, hilibka doofaarka Polish ayaa hore u helay ogolaansho ah inay iibiso dalalka EU-da.
Waqtigan oo kale, Poland waxay la socotaa gargaar, ASF waxay ku kalsoontahay in ay u guurto dhulalka reer galbeedka ee Yurub.